mercredi, 07 août 2019 13:11
Mahajanga: Nahazo fampitaovana ireo mpanjono madinika
Notoloran’ny Minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono lakana 27 manara-penitra sy kojakoja mifanaraka aminy toy ny salotra famonjena aina miisa 54, ary harato maro ny fikambanana mpanjono madinika miisa enina misehatra amin’ny fanaratoana amin’iny morotsirak’i Mahajanga iny.
Teny Amborovy no natao ny fanolorana ny 05 aogositra 2019. Tafiditra indrindra amin’ny vina fitrandrahana sy fitantanana maharitra ny harena anaty rano izao hetsika izao.
Zarao mifanentana amin'ny Faritra ny harena sy ny fitantanana azy.
Aoka ny faritra tsy angataka amin'ny foibe intsony, fa ataovy lalàna, eny soraty anaty Lalampanorenana, tsy azo kasihina mihitsy ny hoe, omena ny Fonkontany 50% vola miditra, 25% an'ny Kaominina sy Région, ary 25% ny an'ny Foibe.
Samy miezaka mampandroso ny faritra tsirairay. Ny Fanjakana foibe izany no misahana ny fanofanana, fanaraha-maso ary ny Fitsarana ho an'izay manodikodim-bola sy mangalatra.
Ireo tany sy harena ambany tany, mitovy amin'izay koa ny fitsinjarana azy, Fonkontany 50%, 25% an'ny Kaominina sy Région, ary 25% ny an'ny Foibe.
Tsy misy Faritra mahantra harena eto Madagasikara. Ny Foibe manampy ireo Faritra osa, amin'ny alalan'ny péréquation na latsakemboka avy amin'ny Faritra rehetra, ohatra 1%, atokana ho an'ireo tena osa, tantanan'ny Fanjakana Foibe iny.